Al-Shabaab Oo la sheegay inay isaga baxeen degmada Ceel-buur, Iyo Ahlusuuna oo sheegtay inay gaareen duleedka Ceelbuur, Warbixin..
July 8, 2012 | Posted by admin DUHUR-Wararka ka imaanaya Degmada Ceel-buur ee Gobolka Galgaduud ayaa tibaaxaya inay Degmadaas isaga baxeen galabta Ciidamadii Xarakada Al-Shabaab ee indha- waalabba ku sugnaa degmadaas.
Wararka ayaa intaa kudarayo in kabixitaanka Al-Shabaab ee Degmada Ceel-buur ay kadanbeeysay kaddib markii uu culeeys ka soo wajahay ciidamada Maamulka Ahlu sunna Waljamaaca Ee ka howlgala Gobolka Galgaduud .
Sida ay sheegeen Mas’uuliyiin katirsan maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca, Al Shabaab ayaa isaga baxay degmada Ceel-buur.
Cabdi Xasan Maxamed oo ku magacdheer Biyo-quute , Oo ah taliyaha Ahlu Sunna ee degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud, ayaa isagoo ku suggan deegaanka Wara-dhuumaleh, waxaa uu warbaahinta u sheegay in ay ciidamadoodu hadda ku sugan yihiin duleedka Ceelbuur Gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Darri , Biyo-quute ayaa tilmaamay inay saacadaha soo socda gudaha u galli doonaan Magaalada Ceelbuur, oo uu sheegay ineey faarujiyeen Ciidamadii Al-Shabaab Ee degmada Maamulayay.
Dhanka kalle Taliyaha Ciidamada Ahlusunna ee Degmada Ceel-buur ayaa ku eedeyay Xarakada Al-Shabaab inay dhibaatooyin u gaystaan dadka shacabka ah ee ku nool degmada, kuwaasoo oo uu sheegay inay ugu danbeeysay Shiikh Caan ka ahaa degmada oo uu sheegay inay Al-Shabaab Dhegta dhiiga u dareen.
Cabdi Xasan Maxamed ayaa shacabka ka codsaday inay guryahooda ku nagaadaan ayna is dajiyaan, waxa uuna balan qaadday ineey sugi doonaan amaanka dadka shacabka ah ee ku dhaqan Degmada Ceel-buur iyo Nawaaxigeeda.
Majiraan warar madax banaan oo xaqiijinaya ka bixitaanka Al-Shabaab ee degmada Ceelbuur, Iyo sidookale sheegashada Ahlusunna ee ah inay gaareen Duleedka Ceelbuur, Hasse ahaatee waxaa jirtay hanjabaad kasoo yeereeysay Maamulka Ahlusuuna Ee Gobolada Dhexe oo sheegayay inay cagta marin Doonaan Xoogaga Al- Shabaab oo Gobolka Galgaduud qeybo kamidda maamulla.
Wixii warar ah ee inaga soo gaaro Gobollada Dhexe waan idin gudbin doonaa, Inshaa’allaah,
« Wariye ka tirsan TV-ga Universal oo lagu dhaawacay Muqdisho
200 oo qof ku dhow oo lagu xiray Baydhabo »